TAARIIKHDA - Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
Lingjie waxaa si rasmi ah looga aasaasay Degmada Qingpu, Shanghai, Shiinaha, wuxuu daboolayaa aag dhan 2,000 mitir laba jibbaaran.
Longjie wuxuu bilaabaa inuu lashaqeeyo Barrette （shirkad Mareykan ah time, laga bilaabo waqtigaas Longjie wuxuu diirada saarayaa biraha PVC iyo xayndaabka PVC iyo badeecooyinka laxiriira, Longjie wuxuu helay guul weyn mudo aad u yar.
(Tijaabada adag ee alaabada)
Longjie wuxuu bilaabay inuu iskaashi la yeesho Menards （shirkad Mareykan ah） wuxuuna qeyb muhiim ah ka qaatay qeyb ka ahaanshaha kalsoonida adag ee Menards. Waxaan siinaa 800 shixnad sanadkiiba iyaga.
(Bandhigyada iyo Mashaariicda)
Si loo daboolo baahida Menards. Waxaan abuurnay warshaddeena labaad oo kutaala magaalada Zhangjiagang City, Gobolka Jiangsu, oo baaxadeedu tahay 10,000 oo mitir murabac ah. Waxaan sidoo kale u wareejinay warshaddeena asalka ah Magaalada Kunshan, Gobolka Jiangsu, oo baaxaddiisu dhan tahay 10,000 oo mitir murabac.
(Warshadda oo Badeecad Ka Buuxda)